Ukukhethwa kwezinto ezintsha zikaJanuwari | Izincwadi Zezindaba
Ukukhethwa kwamanoveli kaJanuwari
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 01/01/2022 12:00 | Kubuyekezwe ku- 29/12/2021 18:25 | Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama
Omunye unyaka oza ugcwele ukufundwa okusha. Lokhu ukukhethwa kwezinye izihloko ezikhishwa ngoJanuwari. Ukuze uthole okuhlukahlukene okuthandayo namagama kazwelonke nawamazwe ngamazwe.
1 Iphrojekthi ye-Silverview - uJohn Le Carré
2 Amanye amantombazane - Santiago Díaz
3 Umqambi Wesihlubuki - u-Lorenzo Silva noNoemí Trujillo
4 Ubusika obuhlanu - u-Olga Merino
6 Iplanethi - uSusana Martín Gijón
Iphrojekthi ye-Silverview - UJohn Le Carré
Siqala ngeyakudala enomlando omude njenge-Le Carré. Indaba yakhe entsha isethula ku-Julian Lawndsley, oseyekile umsebenzi wakhe onzima eDolobheni laseLondon ukuze aphile impilo elula njengomnikazi wesitolo sezincwadi edolobheni elincane elingasolwandle. Kodwa ezinyangeni ezimbalwa ngemva kokuvulwa, ukuvakasha kuphazamisa ukuthula kukaJulian: okuka-Edward Avon, isifiki sasePoland esihlala eSilverview, isithabathaba esikhulu esisemaphethelweni edolobha, okubonakala sengathi wazi okuningi ngomndeni kaJulian futhi ubonisa okuningi kakhulu. intshisekelo yokuqhuba ibhizinisi lakhe elinesizotha.
Amanye amantombazane - Santiago Diaz
U-Santiago Díaz wenza i-debut yakhe enkulu kunoveli Ubaba omuhle Azuze ngakho impumelelo enkulu yokugxeka nokufunda. Manje usebuya nalesi sicoco sesibili asidlala futhi umhloli u-Indira Ramos. Simthole echitha izinsuku zakhe zokugcina zekhefu edolobheni elincane e-Extremadura nokuthi nini buyela emsebenzini EMadrid, kunzima kakhulu kuye ukuthi abhekane nePhini Lomhloli u-Iván Moreno, amfihlela imfihlo enkulu.
Kodwa-ke, kuzodingeka baphinde basebenzisane ukuze baxazulule icala elisha: egalaji likaphethiloli imikhondo yonyawo izigxivizo zeminwe zalowo okwaba iminyaka eminingi indoda efunwa kakhulu ezweni. Icala lokubulala ngesihluku alenzile lishilo futhi amaphoyisa ngeke esakwazi ukuvalela umsolwa oqavile osenesikhathi eside ephila ngaphansi kwegama elingelona iqiniso. Kodwa uRamos uqinisekile ukuthi umbulali onjengaye kwadingeka abulale futhir, ngakho-ke udinga nje ukuthola ubugebengu lapho ungajeziswa khona.
Ukubunjwa komdlwembe - ULorenzo Silva noNoemí Trujillo
U-Lorenzo Silva uvula i-2022 kabili ngalesi sihloko esibhalwe ezandleni ezine futhi Noemí Trujillo. Kuyo bathatha phezulu Umhloli uManuela Mauri ukuthi, kusukela ekuqaleni kwe isexwayiso sezempilo, akawutholi umoya futhi uyaqala ngqa empilweni yakhe ukuzwa ukhungathekile ngezenzakalo. Bese, futhi ngaphezu kwalokho, a ubugebengu obuphindiwe Okwenzeke e-Alcalá de Henares kuzokuqeda ubuthongo: UCarlota, intombazane eneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye, wazisa amaphoyisa lapho ethola uyise nosingamama bedutshulwe beshonile endlini yabo. Iqembu elingekho emthethweni kanye nobufakazi bentsha eyishumi elwa nomphakathi kuyoba ukhiye ekuxazululeni leli cala.
Ngaphezu kwalokho, uSilva naye unikeza Isandla sika-Esteri, eyodwa ukuqoqwa kwezihloko esikhathini samanje kusukela entwasahlobo ka-2020 kuya maphakathi nekwindla ka-2021.
Ubusika obuhlanu - Olga Merino
U-Olga Merino wazinza EMoscow njengomlobi we Iphephandaba laseCatalonia ngo-December 1992, kancane ngemva kokuwa kweSoviet Union. Lapho wachitha ubusika obuhlanu futhi waba ubufakazi boshintsho lonke lwenkathi ephinde yaphawula ngaphambi nangemva kwempilo yakhe yangasese. Kule dayari yentombazane eneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili ubudala, usitshela ukuthi iphishekela kanjani iphupho lokuba umbhali, ukuvelela njengentatheli, nothando olugcwele nolusezingeni eliphezulu. Konke kuphambene nezwi lanamuhla lalowo mbono.
I-Violet - U-Isabel Allende
Yini entsha ngo-Isabel Allende enenkanyezi igama lowesifazane: Violeta, oza emhlabeni ngosuku olunesiphepho 1920 futhi uyingane yokuqala emndenini wezelamani ezinhlanu ezinomsindo. Kusukela ekuqaleni impilo yakho izomakwa ngu izenzakalo ezingajwayelekile. Kusenemisindo yeMpi Enkulu lapho umkhuhlane waseSpain ufika ogwini lwezwe lakubo laseNingizimu Melika, cishe ngesikhathi owazalwa ngaso.
Ngenxa kayise, umndeni uzophuma ungenamyocu kule nkinga ukuze ubhekane nenye entsha: the Ukucindezeleka okukhulu kuphazamisa impilo ka-Violeta ewubukhazikhazi kuze kube yileso sikhathi. Umndeni wakho uzolahlekelwa yikho konke futhi uzophoqeleka ukuthi ashiye phansi a isifunda sasendle futhi kude nezwe. Lapho uVioleta uzofika emdala futhi uzoba naye umkhongi wokuqala.
Ku-a incwadi ebhekiswe kumuntu amthandayo ngaphezu kwabo bonke abanye, uVioleta ukhumbula okudabukisayo thanda ukudumazeka kanye nezothando ezishisayo, izikhathi zobumpofu nokuchuma, ukulahlekelwa okubi kanye nenjabulo enkulu.
Planeta - USusana Martín Gijón
Futhi siphetha ngenye indaba ka I-Vargas Way, umhloli odumile kaMartín Gijón. Kule ndaba entsha ukubonakala enkundleni yegalofu ye isidumbu esopha womuntu wesifazane ufaka isheke IQembu Lokubulala Labantu Sevilla. Futhi, kulowo ohlukunyeziwe bazinqume izinyawo zakhe. U-Vargas kuzodingeka akhansele iholidi elihleliwe noPaco Arenas, owayengumeluleki wakhe nothando oluyimfihlo agcine ehambile wayohlala naye. Sekuyithuba lakhe lokuphenya phakathi kwedolobha esiphezulu uqaphile izimo sezulu futhi licekelwe phansi yizimvula ezinamandla ezishiye abaningi belahlekile.
Khonamanjalo, izindaba ziyanda ukuthi i Umbulali oteketiswa nge-Animalista kungenzeka ukuthi usaphila Futhi ubengeke enze yedwa, njengoba kubonakale amadoda athile anesikhumba epulazini, kube nesigameko esinyantisa igazi endaweni ehlala emanzini kanye nokugetshengwa okungaqondakali ethekwini laseHuelva. Kodwa maduzane lonke iqembu lamasosha lizoba semncintiswaneni wokuhlenga izigidi zabantu engozini enkulu kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Ukukhethwa kwamanoveli kaJanuwari
Gloria Fuertes: izinkondlo